SomaliNet Magazine: SITEEMBER 2002
Qaybtii 8aad - Qaabkii golahu u dhisnaa
Xoghayaha guud ee golaha waxaa loo doortey Cabdullaahi Xasan Maxamad oo xilligaas shaqaale ka ahaa wasaarada waxbarashada Soomaaliya. Cabdullaahi wuxuu kormeere ka ahaa dugsigii sare ee Jamaal Cabdi Naasir ee Allaahida, reerka uu u dhashayna waa (Bart
Qaybihii hore waxaan soo bandhignay danbiyada waaweyn: Shirkiga, in uu qofku qof dilo, sixirka iyo salaadda oo laga tago, Zakada oo aan la bixin, Bisha ramadaan oo sabab la?aan la afuro, qofka oo aan xajiyin isaga oo awooda, Waalidka oo lagu caasiyoiyo Qaraaba goysnimada.
Odaygii Ahmed aabihii oo aan hadal kale soo celin ayaa gurigii ka baxay isaga oo ku sii jeeda xaggii basku ka xigay si uu hawlihiisii dhaqso u soo dhamaysto,inta uunan gabalku dhicin. Ahmed oo isna aad u faraxsan dhinacna ka xishoonaaya ayaa gurigii fiiro dheer u galay,lana yaaba
Qaran iyo Qabiil Tarabi Jama
Bahada warqayska, Somalinet Magazine iyo aqristayaashaba salaaman. Su\_'aasha ah Qaran iyo Qabiil yaa qadarin mudan waxay iila muuqaa oraahdii oranaysay digaagadda iyo ukunta teebaa la hor abuuray?. Waa su?aal marka dhinacyo badan laga eego lafa gurkeedu uu
Talooyinka dadweynaha ee bishii hore
Talo: Ku Samira
Marka hore waxa aab halkaan ka salaamaa bahda wargeyska marka xiga waxa aan leeyahay samiira horta talo waa tii alle laakiin intii ugu muhiimsaneyd waa laguu soo gudbiyay sida aan wargeyska ka aqriyay marka waxa aan ku leeyahay
ARRIMAHA BULSHADA - JACAYLKA DHABTA AH WAA MID LABADA DHINAC LA WADA HAYO
Waxaad moodaa in dad faro badani ay garanaynin micnaha jacaylka, wali mala is waydiiyey micnaha jacaylka dhabta ah? Ma doonaysaana jacayl waaro in aad heshid iyo nolol farxad leh oo waarta rabina raali ka yahay? Haddaba walaal adigoo mahadsan ila eeg qisooyinkan iyo dhanbaalkan jacaylka ah.
DIINTA - JAWAABIHII BISHAN
Asalaamu caleykum waraxmatu laahu wabarkaatu, walaalayaal salaan ka dib waxaan rabaa in layga jaahil bixiyo labo shey:
1)	Hadii ay naagteyda igu dhibtooto xagga galmada anigana aan ahay qof markey falgal suubiyaanba biyaha ka soo hormaraayo oo aan u geyn karin meeshey rab
ARRIMAHA BULSHADA - DHACDO RUN AH: QABIIL BAA DUMIYAY QOYSKAYGII
Fikraddii habeenkaasi ee Muqtaar u soo jeediyey waxaa ay aheyd mid uusan jacelysan dib u dhigista barashada qoyskeena, inkastoo aan niyadda ugu qaboojiyey in aniga nimaan isaga aheyn aan oorridiisa noqoneyn. Wuxuu waqtiga socdo muddo sanad iyo bar ayaa ka soo wareegtay markii
RUMAYSO AMA HA RUMAYSAN - MAXAA KA DHAXEEYA QARAXII SEP. 11 IYO LAMBARKA 11
Maalintii la qarxiyey labadii sarood ee New york waxaa ay ahayd September 11 (9/11)
Waxaase yaab lahaa:
September 11 waxaa ay ku aadan tahay maalinta 254 ee sannadka: 2+5+4=11.
September 11 ka dib waxaa dhamaadka sanadka ka dhimanaanaya 111 maalmood.
Qaybihii hore waxaan la soconay qisadii labadii nin oo dilay wiilkii yaraa oo ay abtiga u ahaayeen kaddibna markii ay arkeen in uu madow yahay (una ekayn aabihiis iyo hooyadiis midna) ayna ka baqeen in ceebi uga timaado. Gabadhii 18 jirka ahayd oo jeclaatay odayga 60 jirka a
ARIMAHA BULSHADA - MAXAY KU DOORTEEN MINNESOTA?
CAYAARAHA - QUBANAYAAL (KENYA)
Meelo faro badan oo dunida ka mid ah ayay dhallinyarada Soomaaliyeed ee isboortiga jecel waxaa ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo noocyada isboorti sida kubbadda Cagta iyo kolayga. Dalka Kenya oo ah meelaha ugu badan oo ay jaaliyadda Soomaaliyeed Ku qaxeen wixii ka dambeeyay dagaaladii sokeeye
Kooxda kubbadda Cagta ee Atlanta
Kooxda kubada cagta ee Atlanta
MA OGTAHAY - AMERIKA IYO YURUBTA GALBEED OO SII KALA FOGAANAYA DHINAC KASTA
Dowladaha Yurubta Galbeed iyo Maraykanka waxaa ka dhexeeya xiriir aad u wayn. Dadka Maraykanka ah oo caddaanka ah waxa ay ku abtirsadaan Yurub waana qoxootigii ugu horreeyey ee Maraykanka soo gala. Sidoo kale Dowladaha Maraykanka iyo Yurubta galbeed waxa ay ku jiraan waddamada horay u maray xagga dh
FANKA IYO SUUGAANTA - GABAY: CAASHAQA HAWEEN
Gabaygan ayaa kamida gabayadii jacaylka ahaa ee abwaan Cilmi Boodhari.
Caashaq haween waa horaa Caadil soo rogaye
Waxa qaarba cayn loo